5 chikafu chisingafanirwe kubikwa mu microwave | Bezzia
Iyo microwave ndeimwe yemidziyo iyo isingashaikwe mune chero kicheni. Chinhu chidiki chizere nezvishandiso chausingazive nguva dzose kushandisa nemazvo. Nekuti kazhinji, microwave inoshandiswa kupisa chikafu, asi inogona kushandiswa kune zvimwe zvinhu zvakawanda. Kubika mu microwave kuri nyore, nekukurumidza, hupfumi uye hutano, nekuti inobika chikafu mujusi yayo uye inoderedza mafuta.
Nekudaro, zvimwe zvekudya hazvifanirwe kuve mumicrowave. Vamwe nekuti vanongorasikirwa nezvinhu zvavo zvikuru uye vamwe nekuti zvinogona kuve nengozi kune hutano. Tsvaga kuti ndezvipi zvikafu izvo zvausingafanire kubika mu microwave. A) Hongu, unogona kushandisa iyi diki mudziyo inoshanda zvekuti zuva rega rega rinopisa chikafu chako muminiti.
1 Chii chisingafaniri kubikwa mu microwave
1.1 mazai akaoma akabikwa
1.4 Mukaka wemuzamu
1.5 Miti yakasvibira yemashizha
Chii chisingafaniri kubikwa mu microwave
Zvikafu zvakawanda zvinogona kubikwa mu microwave pasina matambudziko, kutaura zvazviri, kune zvisingaverengeki zvinonaka uye zvine hutano zvekubika mune iyi fomati. Nekudaro, zvimwe zvekudya kana zvigadzirwa hazvifanirwe kubikwa nenzira iyi, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, senge zvatichakuudza nezvazvo pazasi. cherechedza zvokudya zvisingafaniri kubikwa mu microwave uye uchakwanisa kudzivisa kutya uye kuodzwa mwoyo.
mazai akaoma akabikwa
Kana iwe uchida kugadzirira zai rakakangwa pasina mafuta uye rine hutano hwakanyanya, iyo microwave ndiyo shamwari yako yepamoyo. Asi kana chaunoda kupisa zai rakaoma, tsvaga dzimwe nzira kana kugadzirira kutanga. Mazai akaoma-akabikwa haafanire kubikwa mumicrowave nekuti mukati mayo inoumba mupendero wemwando unogona kuputika kana inopisa mu microwave. Nokuda kwechikonzero ichi, zvakakosha kusvuura zai uye kuricheka usati wapisa mu microwave.
Kana isina kubikwa zvakanaka, utachiona huri muhuku hunogona kuva nenjodzi kuhutano hwako. Nechikonzero ichi, huku mbishi haifanirwe kubikwa mu microwave, nekuti sisitimu yechigadzirwa ichi kupisa chikafu kubva kunze mukati. Kuti haigoni kuvimbiswa kuti chikafu chichabikwa nemazvo, nokuti haaiti zvakafanana. Nokuda kwechikonzero chimwe chete, nyama yakasvibirira haifaniri kubikwa mu microwave.
Chimwe chezvikafu icho chinowanzo kupiswa mumicrowave mupunga, kutaura zvazviri, zvakasiyana-siyana zvakaputirwa zvinotengeswa kuti zvishandiswe mumicrowave. Zvisinei, ongororo dzichangobva kuitwa dzinoratidza kuti izvi zvinogona kuva nengozi zvikuru kuutano. Izvi zvinodaro nekuti mupunga ine utachiona hunoramba kutonhora kwakanyanya izvo zvisingawanzosvikwa mu microwave. Pamusoro pezvo, iyi sisitimu inogadzira mutsetse wehunyoro inova nzvimbo yakakwana yekuti mabhakitiriya akasiyana awedzere anogona kukonzera chepfu yechikafu.
Kutonhodza mukaka waamai ndiyo nzira kwayo yekugadzira chikafu chemwana. Nenzira iyi, achakwanisa kudya paanenge achida kunyange kana amai vasipo. Iye zvino, kupisa mukaka wezamu, zviri nani kushandisa mvura inopisa pane microwave. Zvinonyatsozivikanwa izvozvo mudziyo uyu unopisa chikafu zvisina kuenzana. Mukaka unogona kutonhora kune rumwe rutivi uye uchipisa zvikuru kune rumwe.
Miti yakasvibira yemashizha
Kana uchipisa mu microwave, chikafu chiri mugirinhi mashizha mashizha chinogona kuva nengozi kuhutano hwako. Icho chinhu chinonzi nitrate, iyo inobatsira zvikuru kune hutano, asi kana ichipisa mu microwave vanoshandurwa kuita nitrosamines, chinhu chinogona kukonzera carcinogenic. Saka kana uine zvasara sipinachi, kabichi kana miriwo yemashizha yakasvibirira, zviri nani kuipisa mupani nedonho remafuta emuorivhi.
Izvi zvikafu zvishanu zvisingafanirwe kubikwa mumicrowave, mudziyo unobatsira kana ukashandiswa nemazvo. Saizvozvowo, havafaniri kumbofa kupisa chikafu nemvura yakawanda, semichero, sezvo inogona kuputika kana kuunza mabhakitiriya nekuda kwekunyorova. Neaya matipi, unogona kutora mukana wemudziyo wako wakachengeteka zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Nutrition » 5 chikafu chisingafanirwe kubikwa mu microwave